Nea Ɛto So Abien A Ɔde Kɔmaa Korintofo 6:1-18
Ɛnsɛ sɛ yɛma Onyankopɔn adom yɛ ɔkwa (1, 2)
Nea Paul faa mu wɔ ne som adwuma mu (3-13)
Mo ne wɔn a wonnye nni nntwe kɔndua koro (14-18)
6 Bere a yɛne no abom reyɛ adwuma+ yi, yetu mo fo bio sɛ munnnye Onyankopɔn adom no mmma ɛnnyɛ ɔkwa.+ 2 Na ɔka sɛ: “Bere a ɛfata mu na mitiee wo; nkwagye da na meboaa wo.”+ Hwɛ! Ɛnnɛ ne adom bere. Hwɛ! Ɛnnɛ ne nkwagye da. 3 Yɛnto hintidua wɔ biribiara mu, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrennya yɛn som adwuma no ho asɛm biara;+ 4 na mmom ade nyinaa mu, yedi yɛn ho adanse sɛ yɛyɛ Onyankopɔn asomfo:+ Yemia yɛn ani fa nneɛma pii mu, amanehunu mu, ohia mu, ahokyere mu,+ 5 ɔhwe mu, afiasenna+ mu, basabasayɛ mu, adwumaden mu, yɛda a yɛnna, ɛtɔ da a yennya aduan nni;+ 6 ahotew mu, nimdeɛ mu, abotare*+ mu, ayamye+ mu, honhom kronkron mu, ɔdɔ a nyaatwom nnim mu,+ 7 nsɛm a yɛka a ɛyɛ nokware mu, Onyankopɔn tumi+ mu; yɛnam trenee akode+ a ɛwɔ yɛn nsa nifa mu* ne yɛn nsa benkum mu* so, 8 yɛnam anuonyam ne animguase so, yɛnam asɛmmɔne ne asɛmpa so. Wobu yɛn sɛ nnaadaafo, nanso yɛyɛ anokwafo; 9 wobu yɛn sɛ nnipa a wonnim yɛn, nanso wonim yɛn paa; wobu yɛn sɛ nnipa a yɛrewu,* nanso hwɛ! yɛte ase;+ wobu yɛn sɛ nnipa a wɔatwe yɛn aso,* nanso wonkum yɛn;+ 10 wobu yɛn sɛ nnipa a wɔredi awerɛhow, nanso yɛn ani gye daa; wobu yɛn sɛ ahiafo, nanso yɛma nnipa pii yɛ adefo; wobu yɛn sɛ nnipa a wonni hwee, nanso yɛwɔ nneɛma nyinaa.+ 11 Korintofo, yɛabue yɛn ano akasa akyerɛ mo,* na yɛabue yɛn komam kɛse. 12 Yɛn de, yɛada yɛn dɔ nyinaa adi akyerɛ mo,*+ nanso mo de, monnaa mo dɔ nyinaa adi nkyerɛɛ yɛn. 13 Enti mekasa kyerɛ mo sɛ me mma. Sɛnea yɛayɛ ama mo no, mo nso, mummue mo komam kɛse.*+ 14 Mo ne wɔn a wonnye nni nntwe kɔndua* koro.+ Na ayɔnkofa bɛn na trenee ne bɔne* wɔ?+ Anaa kyɛfa bɛn na hann ne sum wɔ?+ 15 Afei nso, abusuabɔ bɛn na Kristo ne Belial* wɔ?+ Anaasɛ dɛn na gyidini* ne nea onnye nni wɔ yɛ?*+ 16 Na baakoyɛ bɛn na Onyankopɔn asɔrefi ne abosom wɔ?+ Efisɛ yɛyɛ Onyankopɔn teasefo no asɔrefi,+ sɛnea Onyankopɔn kae no. Ɔkae sɛ: “Mɛtena wɔn mu,+ na manantew wɔn mu, na mayɛ wɔn Nyankopɔn, na wɔayɛ me man.”+ 17 “‘Enti mumfi wɔn mu, na montew mo ho,’ Yehowa* asɛm ni, ‘na munnyae sɛ mode mo nsa ka nea ɛho ntew no’”;+ “‘na megye mo.’”+ 18 “‘Na mɛyɛ mo agya,+ na mo nso mobɛyɛ me mma mmarima ne me mma mmea,’+ ade nyinaa so Tumfo Yehowa* na waka.”
^ Ebia ɛno na wɔde ko.
^ Ebia ɛno na wɔde bɔ wɔn ho ban.
^ Anaa “yɛfata owu.”
^ Anaa “wɔateɛ yɛn so.”
^ Anaa “yɛaka nea ɛsɛ sɛ yɛka biara akyerɛ mo.”
^ Anaa “yensiw mo kwan yɛn komam.”
^ Anaa “mo nso montrɛw mo komam.”
^ Greek asɛmfua a wɔde yɛɛ adwuma wɔ ha no, ɛkyerɛ sɛ, wɔn a wɔretwe kɔndua no, wɔn ahoɔden ne wɔn tenten nyɛ pɛ.
^ Efi Hebri asɛmfua bi mu. Ɛkyerɛ “Obi a Ne So Nni Mfaso Biara.” Wɔde ka Satan ho asɛm.
^ Anaa “ɔnokwafo.”
^ Anaa “kyɛfa bɛn na gyidini ne nea onnye nni wɔ?”